ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင် - APANNPYAY
Home / ဗေဒင်ကဏ္ဍ / ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင်
ရာထူးတက် ငွေကြေး အခက်အခဲကို အောင်မြင်စေသော အစီအရင်
Apann Pyay 7:04 AM ဗေဒင်ကဏ္ဍ Edit
လိ​မ္မော်​ ​ရွှေထီး ဓာတ်​ရိုက်​ဓာတ်​ဆင်​
ရာထူးတိုးတက်​လိုသူများ /ကံနိမ့်​၍ စီးပွား​ရေး အဆင်​မ​ပြေသူများ /အိမ်​တွင်း​ရေး အပူ​သောကများ​နေသူများ/​ဈေးဆိုင်​​ရောင်းမ​ကောင်းသူများ ပြုလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​။ကံတက်​ပြီး လာဘ်​ပွင့်​​စေ​သော အစီအရင်​ ဖြစ်​ပါတယ်​။
၁. ပြုလုပ်​ရမည့်​ အချိန်​က.တနင်္လာ​နေ့ နံနက်​ ၅နာရီ ၄၅မိနစ်​ပါ။
၂. ပြုလုပ်​ပုံက​တော့ ​ကြွေပန်းကန်​ပြားထဲ လက်​ဖက်​အစိုကို​အောက်​က ခင်းပြီး လိ​မ္မော်​သီး ၃လုံးမှာ ​ရွှေထီး ၃လက်​စိုက်​တာပါ။ လိ​မ္မော်​သီးက မည်​သည့်​လိ​မ္မော်​အမျိူးအစား မဆို ရပါတယ်​။
၃. ဘုရားလှူရသည်​ မဟုတ်​ပါ။ အိမ်​​ခေါင်းရင်းမှာ အမြင့်​တစ်​​နေရာမှာ ထားပါ။
၄. စွန့်​ရမည့်​အချိန်​က ​သောကြာ​နေ့ ည ၉နာရီ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လက်​ဖက်​နဲ့ ​ရွှေထီးကို စွန့်​ပစ်​ပါ။ လိ​မ္မော်​သီးကို ခွာ၍ အထဲမှ အမွှာ​လေးများကိုပါ တစ်​ခုစီမွှာပါ။ အခွံများ အသီးမွှာများနှင့်​ အ​စေ့များ အားလုံးကို အိပ်​တစ်​လုံးတွင်​ စုထည့်​၍ ​ချောင်း/မြစ်​/ကန်​ တစ်​ခုသို့ စွန့်​ပါ။ ​နောက်​တစ်​​နေ့ နံနက်​မှ စွန့်​လို့ရပါတယ်​။
၅. ၃ကြိမ်​ ၃ပတ်​ဆက်​တိုက်​ ပြုလုပ်​ပါ။